Tag: Fitaovana fanatsarana motera fikarohana maimaim-poana
Flora Pang dia mitazona lisitr'ireo fitaovana marketing maimaimpoana nataon'i Flora Pang izay tokony hohamarininao. Ireo fonosana dia: Fitaovana fanatsarana milina fikarohana maimaim-poana - ao anatin'izany ny fikarohana ny teny lakile, ny fizahana sy ny fanadihadiana ny tranokala, ny fanadihadiana backlink, ny hakitroky ny teny lakile, ny crawlability site, ary ny atiny duplicate. Fitaovana karama maimaim-poana sy karama ilaina isan-tsindry - ao anatin'izany ny fanatsarana ny pejy fitobiana. Fitaovana media sosialy maimaim-poana - ao anatin'izany ny fihainoana ara-tsosialy, ny fandaharam-potoana ara-tsosialy ary ny fanadihadiana ara-tsosialy. Fitaovana marketing amin'ny atiny maimaimpoana